Sida loo hubiyo barnaamijka uu Apple saxiixayo | Wararka IPhone
Sida loo hubiyo waxa firmware ah ee Apple uu saxiixayo
Wararka IPad | | macruufka 8, Noticias
Dad badan ayaa u janjeera inay wax ka tagaan ilaa daqiiqada ugu dambeysa (anigu mid baan ka ahay). Mararka qaar nasiib ayaan leeyahay mararka qaarna ma ihi. Mid ka mid ah kiisaska ugu caajiska badan waa in la soo celiyo wixii iDevices-kayga ah ee xoqan, ilaa hawshu waa gaabis, inta udhaxeysa nooca ugu dambeeya ee iOS ayaa la soo dejiyaa, iTunes ayaa dib u soo celisa iDevice ka dibna waa inaan nuqul ka dhignaa dhamaan codsiyada aan rakibnay. Inta u dhaxaysa foori iyo biibiile dhawr saacadood ah ayaan doqonnimada u raacnaa.
Apple waligeed kama digto markay joojiso saxiixa firmware in aan ku rakibno aaladahayaga mar nooc cusub la soo saaray, markaa had iyo jeer waxaan kharash ugu jirnaa isku dayga inaan eegno haddii aan nasiib badan nahay. Dhamaan isticmaaleyaashaas oo had iyo jeer doonaya inay tijaabiyaan nooca ugu dambeeya ee macruufka, laakiin ha ku dhicin inaad lumiso Jailbreak adigoon ogeyn inay awood u yeelan doonaan inay ku noqdaan qaybtii hore, waxaa jira degel noo sheegaya dhammaan noocyada macruufka ee Apple ay saxiixeyso hadda.
Sidan ayaan ku hubin karnaa, dhowr ilbiriqsi gudahood, haddii aan weli dooneyno inaan dib ugu laabanno noocii hore ee macruufka si aan u sii xirno, tusaale deg deg ah. Si tan loo sameeyo, waa inaan dooranaa oo kaliya qalabka aan helno helitaankiisa, ama waxaan booqan karnaa shabakadda http // ipsw.me / 8.1 si aan u aragno dhammaan aaladaha la jaan qaadaya nooca ugu dambeeya.
Hadda nooca ugu dambeeya ee iOS waa 8.1.1 oo aan taageerin Jailbreak, laakiin inkasta oo aan muddo toddobaad ah qaatay tan iyo markii la soo saaray noocyadan ugu dambeeyay, mahadnaqa websaydhkan, weli waan xaqiijin karnaa inaan ku laaban karno qaybtii hore, hoos u dhigno macruufka 8.1 si aan ugu raaxeysto Jailbreak. Websaytka IPSW.me waa la cusbooneysiiyaa dhowrkii daqiiqaba mar markaa macluumaadka ay muujiso waxay ku dhowdahay waqtiga dhabta ah. Haddii aan nahay isticmaaleyaasha IFTTT waxaan abuuri karnaa cunto karinta markii isbeddel lagu sameeyo saxeexyada noocyada kala duwan ee iOS si loogu wargaliyo ku dhowaad daqiiqadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 8 » Sida loo hubiyo waxa firmware ah ee Apple uu saxiixayo
Maalin kale uun baa shaki iga galay. Waxaan iibsaday iPhone 6 oo la yimid iOS 8.0 waxaanan rabay inaan ogaado haddii aan wali u gudbin karo macruufka 8.1 ka hor inta aanan sameynin JAILBILBY (Ma aanan ogeyn haddii Apple wali saxeexay) mana aanan helin macluumaad khuseeya marka laga reebo qoraalada ku jira fagaarayaasha Mareykanka halkaasoo dadku ku yiraahdeen uguyaraan ilaa dhowr saacadood kahor inay shaqeyneysay, sidaa darteed waxaan qaatay qatar iyo guul, laakin wax dhib ah malahan inaan helo macluumaadkan mustaqbalka.
Mahadsanid Ignacio 😉
Abuuritaanka ogeysiisyo ay uga mahadcelinayaan IFTTT isla shabakaddan ayaa faa'iido weyn leh, in kastoo isla marka ay na soo wargeliyaanba aan kuu sheegi doonno tell
Waxaan isku dayay inaan cusbooneysiiyo iPad mini retina 2, ilaa iOS 8.1 iyo in kastoo aan soo dejinayo firmware u dhigma, hadana marwalba waxaan helaa ogeysiiska firmware AAN LA QABAN KARNAYN FIKRAD!
maxay noqon doontaa isha waxaan isku dayay oo dhan!
Wax la mid ah ayaa ku dhacay taleefankayga iPhone 5, waxaan soo degsaday dhowr ipsw illaa aan ka helay waxay ahayd, in kasta oo aragti ahaan aysan ahayn qaabka saxda ah.
Miyaad hubisay inaad soo dejisay ipsw-gaaga noocaaga ah?
Haa, 4-ta jir ah ee isku qaab ah iyo bogag kala geddisan, haddiiba ay ahaayeen dhibaatooyin xagga qalabka wax lagu kaydiyo oo aan waxba ahayn, waxaan helayaa qaladka
Hagaag, Apple wuxuu sii wadaa inuu saxiixo macruufka 8.1. Miyaad hubisay in noocaaga iPad-ku u dhigmo nooca qalabka aad soo degsanayso? Waxaa jira dhowr nooc.
Si sax ah isla bogga waxaad kala soo bixi kartaa qalabka kumbuyuutarka nooc kasta oo iPad ah.
ASXAABTA NOOCAN AH WAAN LEEYAHAY 5 GEN IPOD. IYO WAXA AAD KA DIB KA EEGTO BOGGA https://ipsw.me/ WUXUU I SHEEGAA IN TODOBAADKII UU ISUGU SaxIIXAY iOS 9.2.1 OO AAN RABO IN AAN BADHOODA IPODKAYGA LAAKIIN MA RABO IN AAN HALISO, FADLAN AAD TAAGEERI KARTID, WAAD KU MAHADSAN TAHAY HORYAAL. !!
Ku jawaab KOOZE
Waa maxay sababta aysan jirin wax amar ah oo ku saabsan kumbuyuutarrada saddexaad ee iOS?
Muraayadaha Xaqiiqda ah ee lagu dhawaaqay ee loogu talagalay iPhone 6 oo leh isdhexgalka goobta